Vanachiremba havazive Kuti Vako Vana Vani Vanoenda Ndivanaani | KUSVIRA
Vanachiremba Havazive Ndivanaani Real Trans Kids Vana
Iko Kuedza Kune Vana Vedu: Varapi Haazivi Kuti Vapi Vechokwadi Vana Vana
June 12, 2017By Walt HeyerVanachiremba parizvino havana nzira yekufungidzira kuti ndevapi vana vanogona kuramba vachiwedzera mune yavo gysphoria, uye zvakadaro ivo vari kusheedzera zera rakachembera rekusachinja hormone kurapa uye kuvhiya zvakaderera sezvinobvira.
Zvinoenderana nehungwaru hwezuva, vana vanosangana nehurume dysphoria vanofanirwa kurapwa zvinosimbisa pakutanga-uye zvakanyanya - sezvinobvira. Kwenguva iripo, kuvhiyiwa uye kurapwa kwehomoni vanofanirwa kumirira kusvika makore gumi nematanhatu. Asi izvi zvisati zvaitika, vayaruka vanogona kuve vanonzi vanokwanisa kuyaruka vanovharira, uye kunyange vana vadiki vanokurudzirwa kuchinjika "munharaunda," kuburikidza nekutora zita, mapfekero, uye maitiro evanoda vakadzi
Izvi zvese zvinoitika kunyangwe chokwadi chekuti dysphoria muvana inoona yakaderera miitiro - kubva pa2.2% kusvika ku30% muvanhurume uye kubva ku12% kusvika 50% mune zvevakadzi. DSM-5. Sokutaura kwakaita Dr. Kristina Olson, nyanzvi yezvidzidzo zvepfungwa paUniversity yeWashington, "Hatina tsanangudzo chaiyo munzira imwe neimwe." Chokwadi ndechekuti hapana munhu angafanotaura kuti mwana wechirume anonzwa sei? nzira kwapera. Ndosaka Olson ari kutungamira kudzidza kwe300 trans vana iyo icha tarisa zvabuda mumakore makumi maviri. "Kuti tikwanise, netariro, kupindura kuti ndedzipi vana vanofanirwa kana kusachinja," akadaro. Panguva ino, vazhinji veavo vana vachakurudzirwa kuenda mberi uye nekugadzirisa-hupenyu hunochinja sarudzo mukurangarira kwesainzi.
Mahwindo Ari Kuwedzeredzwa, Kwete Akawandisa
Maitiro ekurapwa uye ezvemagariro kune vanhukadzi dysphoria kukurudzira uye kusimbisa kuzviongorora kwemwana uye kupa mishonga yekurapa uye kusakosha kwezvemagariro uye kwekurapa kwevakadzi pasina kunyatsoongorora zvirongwa zvinoshanda zvekurapa.
Asi izvo, timu yevanachiremba epasi rese yakabatana neThe Endocrine Society, Pediatric Endocrine Society, neWorld Professional Association yeTransgender Health-ese ayo anoremekedzwa mune iyi ndima yekurapa—iri kunyora zvekare nhungamiro yekurapa kuitira kuti shanduko yevakadzi yakarovedzwa mune zvokurapa ive yakakurudzirwa kuvana vadiki kupfuura gumi nevatanhatu. Izvi zvinomiririra kubuda kukuru kubva kune dzaive dzatobvumirwa kurapa vana vanonzwa kuti vari muhurume husina kunaka.
Kusvika parizvino, nhungamiro dzakakurudzira kupa preadolescent vana kuyaruka blockers kuti vape nguva yakawanda yekufunga nezve kuenda kumberi neinonyanya kurapwa kurapwa. Asi pasi pezviratidziro zvitsva, iyo inonyanya kurapwa marapirwo echirume-echirume mahormone inokurudzirwa kune vana vari pasi pemakore gumi nematanhatu. Mazhinji mhedzisiro yemahormone, sekuderedzwa kwepfupa uye kuderedzwa kubereka, haichinjiki. Dzimwe njodzi hadzina kufundwa zvachose.
Kuita Sarudzo Inoziviswa Hazvigoneke
Munguva pfupi yapfuura email yakapinda mubhokisi rangu inbox ine chinyorwa "Ndinoshuva kuti ndakuteerera iwe" kubva kune jaya rinodemba kutora ma-sex-sex mahomoni nekuvhiyiwa.
Ini ndiri pakati peangu [makumi maviri]. Ndakachinja muhudiki hwangu uye ndakavhiyiwa. Ndakanga [mudiki] kuti ndisarudze zvakadaro. Ndakanyura mukuzvidemba kukuru. Handichanzwi ndichitapukira. Ndinonzwa senge munhu wangu wekare. Ndiri kufara nechitarisiko chechikadzi asi ndizvo chete zvandinonyatsoda. Ndinonzwa sekunge ndakagadziriswa neiyo transgender ajenda uye neyakajairika kutarisira. Ini ndingaite chero chinhu kuti [ndive] nepenisi yangu kumashure. Manzwiro angu aivhiringidza uye ndaifunga kuti vaisazomboenda. Ini ndiri mukomana anongo nyatsobata padivi rangu rechikadzi. Handitende izvo zvandakaita kuhupenyu hwangu. Uye ikozvino ini handina sarudzo asi kutora mahormone zvachose. Handizive zvekuita. Ndinoita kunge ndiri kurasikirwa nepfungwa dzangu. Zvese zvandaizoda kuita kwaive kubvisa mahormone angu and zvese zvaizove zvakajeka. Ini nekuvimbika ndinonzwa 100% yakajairika uye yakanaka. . . dai chete ndakanga ndisina kumbovhiyiwa.
Muviri wejaya uyu wakakuvadzwa zvachose nekuti vanachiremba, vasina zano rekuti ndiyani acharamba arimo muchirwere chedysphoria, anokurudzira kurapwa kusingaitwe kune vechidiki vanonzwa vachipokana nezvechikadzi. Asi seizvo murume wechidiki uyu akaziva, kunyangwe nemanzwiro akasimba akashanduka.
Yangu nyaya Zvakafanana: Ini ndakanga ndiri mwana wekutapurirana, uye ndakavhiyiwa shanduko yebonde mushure mekumirira kusvika ndazova munhu mukuru. Kugara mukusagadzikana kwevakadzi kwehusina hupenyu hwangu hwese uye ndichishuva kugadziriswa, ndakatora nzira yeshanduko iyo yakakurudzirwa nanachiremba vepamusoro vechirume. Ndakavimba nhungamiro yavo. Asi izvo hazvina kudzivirira mafungu ekuzvidemba akatevera.
Nhoroondo dzako pachedu dzakadai seiyi dzinosimbisa iyi nhoroondo yechokwadi: hapana anoziva kuti ndiani anofanira kushandura kana zera ripi, kana chero munhu angambozviita. Tichifunga nezvekusakwanisa kwedu kufanotaura remangwana revana, chero chiremba arikushanda anodzidzisa mahormoni anovharira pamanzwiro emwana ari kufuratira kana kudzinga chokwadi chechokwadi uye kunyepedzera kuziva zvaasingave iye. Kuregeredza sainzi haina kunaka uye kunoisa vana nevabereki panjodzi yekuzvidemba kweupenyu hwese nekuda kwekutenderana nemaitiro asiri iwo.
Vana vadiki vari kuita iyi "sarudzo" maringe nemanzwiro, kwete echokwadi echokwadi bvunzo bvunzo, asi vana vadiki kwazvo kuti vasaite hupenyu hunochinja, uye pamwe hunoshungurudza, sarudzo. Vana nevabereki vanofanirwa kukwanisa kuvimba kuti vanachiremba havasi kuzotamba mutambo weRussia roulette nehupenyu hwavo.
Shanduko Yemagariro Haina Kukuvadza Pese
Kunyangwe kana kusiri kuchenjera kuita zvehomoni nekuvhiyiwa kupindira muhupenyu hwevakadzi hwehupenyu, hazvisi iro zano rakanaka kuvabatsira munharaunda shanduko, kana voda kuchinjika makore anozotevera, sevakuru? Kwete: tsika iyi haina kana zvakakomba njodzi.
Sezvo Eric Vilain, geneticist uye mutungamiri weCentre for genetic Medicine Research pavana National Health System, anoratidza, kushandurwa kwemagariro kune mutoro kupesvedzera kufunga kwevana. "Kana vana vakamanikidzwa mukutenda uku zvichave zvakanyanya zvakaoma kuti vabve mukutenda uku nekuti munhu wese achange abvumirana nazvo pakutanga," Dr. Vilain anodaro. Chinhu chimwe chinhu kuti vakure vachivhiringidzika nezve munhukadzi; ndechimwe chinhu kukura kukura uchiudzwa kuti imwe yeboka rinokosha re "vana vacheche."
Asi kuita kuti vanhu vese - vabereki, vanun'una, vamwe vaanodzidza navo, kuti vabvume kuti mukomana mudiki hazviite, uye hazvishandure chokwadi chekuti hakuna munhu anokwanisa kufanotaura kuti ndeupi murume wevacheche vangazosara vari murume kana murume dysphoric sezvo nguva inoenderera. Hapana chimwe cheizvi ndechekugadzirisa mubvunzo wekuti kana avo vanopfuurira murudzi rwavo dysphoria vachawana zororo ravanoshuva nekushandura. Asi vana vanokurudzirwa kushanduko yemagariro vari kuiswa "munzira iyo ichave yakawanda yekurapa nekuvhiya," uye ivo vachave vese vanogona kutora matanho asingadzoreke nekuti vakaudzwa kwehupenyu hwavo hwese kuti " trans, ”kuti ivo ndi" chaiye "murume kana mukadzi wavanofunga kuti ndizvo.
Asi - maererano nehuchazvino ruzivo rweSainzi pamusoro pekuenderera mberi kwehunhu hwevasikana dysphoria - vazhinji vevana ava vangadai vakakura kubva kune ravo gysphoria vari voga. Kuderedza makore mashoma ekuvhiya anongowedzera mukana wekuti vana vabvume kuita maitiro avanozodemba.
Vana veTransgender havafanirwe kuiswa munzira yekupindira kusingakodzeri uye kusingashandurwe kwekurapa kunosanganisira mahosi-echisimba mahormone uye kuvhiyiwa muviri. Nharaunda yesainzi haina kungoratidza kushanda kwenguva refu kana kudzidza njodzi nekukuvara kuri kuitwa.
Panguva ino, usarege kuita zvemidzimu zvakatenderedza nyaya iyi kukukanganisa kubva pachokwadi: tiri kuyedza kuvana vedu. Tichadzidza makore makumi maviri kubva zvino, apo kudzidza kwaDr Olson kwapera, kunyangwe vanachiremba vakanganisa. Saka takamirira.
Walt Heyer munyori anokwanisa uye mutauri wepachena. Kuburikidza newebhusaiti yake, SexChangeRegret.com, uye neblog rake, WaltHeyer.com, Heyer inomutsa ziviso yeruzhinji nezvezviitiko zvekuzvidemba uye nemhedzisiro inoshungurudza yakatambura nekuda kwekuvhiyiwa kwepasina kuringana kwepabonde.